कसरी स्टार्टअपहरू उत्पादन हन्टमा आफ्नो सुरूवात कील गर्दै छन् Martech Zone
कसरी स्टार्टअपहरू उत्पादन हन्टमा आफ्नो सुरूवात कील गर्दै छन्
शनिबार, जनवरी 7, 2017 शनिबार, जनवरी 7, 2017 एन्ड्र्यू Gazdecki
कुनै पनि उद्योगमा स्टार्टअपको लागि प्रक्षेपण प्रक्रिया सार्वभौमिक हो: एक महान विचारको साथ आउँनुहोस्, प्रदर्शन गर्न यसको डेमो संस्करण बनाउनुहोस्, केही लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस् र त्यसपछि लाभ एक पटक तपाईं समाप्त उत्पादको साथ बजारमा थिच्नुभयो भने। अवश्य पनि, जसरी उद्योगहरू विकास भएको छ, त्यस्तै उपकरणहरू पनि छन्। यो प्रत्येक पुस्ताको लक्ष्य सार्वजनिक आँखामा स्टार्टअपहरू प्राप्त गर्न नयाँ तरिका उजागर गर्ने हो।
अघिल्लो युग उत्पादन शुरू गर्न ढोका-ढोका सेल्सम्यान, मेलिंग र टिभी र रेडियो विज्ञापनमा निर्भर थिए। जबकि केहि उपकरणहरू अझै पनि आजका वरिपरि छन्, एक आधुनिक मोडलाई बिल्कुल आवश्यक छ ता कि आजको स्टार्टअपहरूले व्यस्त बजारमा ठाउँ पाउन सक्छन्।
२०१ove को ग्रुभको एलेक्स टर्नबुलसँगको अन्तर्वार्तामा, उत्पादन हन्ट संस्थापक र सीईओ र्यान हूवरले उनको दर्शनको रूपरेखा प्रस्तुत गरे, उनी आफ्नो बुबाबाट टाढा गए: एउटा प्वाल फेला पार्नुहोस् र भर्नुहोस्
हूवरले ठूलो प्वाल फेला पारे र यसलाई भर्ने तरीकाको साथ आयो। सम्भावित स्टार्टअप भएकाहरूको लागि भेट हुने ठाउँ, साइटले प्रयोगकर्ताहरूको अप वा डाउनभोटहरू मार्फत व्यक्तिगत केसहरू सुदृढ पार्न वा कमजोर पार्न मुखको शब्दमा भर पर्दछ। यदि तपाईं आगामी फिडलाई सार्नको लागि पर्याप्त अपभोट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ सबै सुरुवातहरू सुरु हुन्छन्, तपाईं साइटको अगाडिको पृष्ठ र फिचर फीडमा सर्नुहुनेछ।
प्रस्तावमा उत्पादनहरूको दायरा सबै ठाउँमा छन्। टेचिहरूले फोन र मोबाइल अनुप्रयोगहरूको मजा लिने छन्, जबकि पुस्तकहरू र अन्य आईटमहरू विचारको लागि उपलब्ध छन्। यो जहाँ छ तपाईंको शत्रु चमक सुरु भयो। वेबसाइटको सुरुवात सोशल मीडियामा हिटि 24को २ media घण्टा भित्र, चासोले सिर्जनाकर्तालाई वेबसाइट राख्न बाध्य तुल्यायो बिक्री को लागी.
साइटले सुरुआत फिचर गर्न रुचाउँदछ जुन 'नयाँ' हो - पहिलो पटक विकासकर्ताहरूको प्रयास मात्र होईन, तर आईटमहरू जुन प्रख्यात कम्पनीहरूबाट उल्लेखनीय रूपमा अपडेट गरिएका छन्। तिनीहरूले आइटमको साथ सिर्जनाकर्ताहरूलाई पनि अनुमति दिन्छ जुन आफ्नो स्टार्टअप पोष्ट गर्न राम्रोसँग परिचित छैन, यद्यपि वस्तु प्राविधिक रूपमा नयाँ छैन।
अनुप्रयोगहरू जुन पुनःब्रान्डेड छन् सूचीबद्ध गर्न पनि योग्य हुन सक्छन्। यदि तपाईं लेखकको अधिक हुनुहुन्छ भने, तब उत्पादन हन्ट तपाईंको लागि नहुन सक्छ, किनकि साइटले लेखहरू र ब्लग पोष्टहरू स्वीकार गर्दैन। सम्झौता सेवाहरू पनि साइटमा स्वीकृत हुँदैनन्।
यो लगभग सफल संग प्रमाणित छ Fans 170,000० प्रशंसकहरू गत मेको रूपमा फेसबुक र ट्विटरमा र एक आश्चर्यजनक आठ ट्विटर प्रोफाइलहरू।
अझै अभिभूत महसुस गर्नुहुन्छ? हामीले केहि सुझावहरू प्राप्त गरेका छौं तपाईको उत्पादन खोज अनुभव एक उत्तम हो भनेर निश्चित गर्नका लागि।
समान उत्पादनहरू खोज्नुहोस्
यो उत्पादन हन्टमा कुनै पनि प्रक्षेपणको योजना बनाउनु अघि पहिलो चरणलाई छोड्न सक्नुहुन्न, विशेष गरी यदि तपाईं रुकी पोष्टर हुनुहुन्छ। अनुसन्धान गर्न र समय निकाल्दै कसरी अन्य कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूले आफ्नै कामको मार्केटिंग गरे, ट्यागलाइनहरू तल तल, एक महत्त्वपूर्ण सुरूवात विन्दु हो। ती क्याचफ्रेजहरू याद गर्नुहोस्, तर नबिर्सनुहोस् उनीहरूले कसरी ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सिर्जना गरे। प्रत्येक तत्वलाई उफ्रिनु अघि विचार गर्नुपर्नेछ, आफैलाई तन्काउनु जस्तो नै विपत्तीमा अन्त हुन्छ। चलाख हुनुहोस्।
जब मेरो कम्पनीले प्रोडक्ट हन्टमा सुरू गर्ने प्रयास गर्‍यो हामी करिब4बर्षको थियौं र स्थापना गर्यौं। हामीले हाम्रो DIY मोबाइल को प्रयोगकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौं अनुप्रयोग निर्माता एक महान सेवा थियो तर यो को नवीनता केहि पूरा नयाँ नेतृत्व छैन हामी एक सफल प्रक्षेपण छैन। त्यसो भए, यहाँ मुख्य बुँदा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले नयाँ कुरा ल्याउदै हुनुहुन्छ तर के छैन जुन पहिल्यै हन्टमा राखिएको छ राम्रो परिणामहरू छैन।
तपाइँका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्न राम्रो छ। अरुको गल्तीबाट सिक्नु राम्रो हुन्छ। वारेन बफेट
तपाइँका प्रभावकारीहरू पत्ता लगाउनुहोस्
वेबसाइटमा सफलताको अर्को मार्गले प्रभावकारीहरू पत्ता लगाइरहेको छ - व्यक्ति जो साइटमा भर्खरै पोष्ट गरिएको नयाँ स्टार्टअपमा रुचि लिन सक्दछन्। कम्पनीसँग जोडिएकाहरूका लागि मानक छ उनीहरूको ईमेलमा शुट गर्न स्टार्टअपमा धकेल्दै आएका कामदारहरूलाई नयाँ उत्पादनलाई अपवाइट गर्ने उद्देश्यले उनीहरू उत्साहित हुँदै। व्यक्तिहरूको लागि, परिवारका सदस्यहरू र साथीहरूसँग समान कार्य गर्न पूर्ण रूपमा ठीक छ। (हुनसक्छ तपाईकी काकीले ईमेल मास्टर गरेन। हरेक मत गणना, याद गर्नुहोस्।)
त्यहाँ सीमाहरू छन्, यद्यपि। उत्पादन हन्टले कम्पनीहरूलाई साइटको गृह पृष्ठमा स्पट मात्र खरीद गर्न अनुमति दिँदैन। केही फरक पर्दैन कसरी ट्र्याक रेकर्ड, तिनीहरूले अझै पनि सबैलाई जस्तै upvotes को माध्यम बाट एक उच्च रैंकिंग कमाउनु पर्छ।
साइटको लागि केहि बनाउँदा दिमागमा स्पीड राख्नुहोस्
समान वेबसाइटहरू भन्दा फरक, उत्पादन हन्टको एल्गोरिथ्म गतिमा निर्भर गर्दछ। साइटको घडी मध्यरातमा PST मा हिर्ने बित्तिकै, नयाँ दिन सुरु हुन्छ र अघिल्लो दिनको दैनिक शीर्ष मत प्राप्तकर्ताहरू खाली हुन्छन्। त्यसोभए, ती विकासकर्ताहरूको लागि आवश्यक छ कि यो निश्चित गर्नुहोस् कि सबै चीजहरू सेट भएको छ र तैयार छ एक पटक उत्पादन पोस्ट गरिसकेपछि र तपाईं प्रयोगकर्ताहरूको दयामा हुनुहुन्छ। किनकि उत्पादन हन्टले पुन: पोष्टलाई अनुमति दिँदैन जबसम्म केहि केसहरूमा (माथि उल्लेख गरिएको), त्यो एक दिन निर्णय गर्दछ कि तपाईंको सुरुवात सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ।
प्रयोगकर्ता समीक्षा तपाईंको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ
स्मार्ट विकासकर्ताहरू र डिजाइनरहरूले उत्पादनलाई मद्दतको लागि समीक्षा प्रयोग गर्छन्। डिजाइनरहरूले कसरी साइट फोनमा टिप्पणीहरू पढेर र बगहरू ठीक गरेर उनीहरूको फोन अनुप्रयोगको बीटा संस्करण सुधारिएको थियो भन्ने बारेमा कथाहरू बताएका छन्। उत्पाद हन्टको एफएक्यु पृष्ठले जोड दिन्छ कि एक अनुप्रयोग मात्र पुनःस्थिति गर्न सकिन्छ यदि अपडेटहरू 'पर्याप्त' हुन्छन् - यहाँ वा त्यहाँ ट्वीकको सट्टामा महत्त्वपूर्ण नयाँ सुविधाहरू। समुदाय व्यवस्थापकहरूले साना अपडेट्स अस्वीकार गर्दछन्, त्यसैले यो दिमागमा राख्नुहोस्।
स्वीकार्य सुविधाहरूको उदाहरणले विस्तारित ईन्टरफेसबाट बहु प्लेटफर्महरूमा उपलब्धता बढाउनको लागि गामुट चलाउँछ, सायद वेबसाइटको नयाँ मोबाइल संस्करण। नयाँ लोगो गणना पनि!
बस हेर्नुहोस् मिनीबक्स। फाईल सेयरिंग अनुप्रयोग हालको दुई वर्ष पछि यसको तेस्रो पुनरावृत्तिमा छ बिभिन्न प्लेटफार्मका लागि बहु संस्करणहरू म्याक-मात्र प्लेटफर्मको रूपमा सुरू गरेपछि।
तपाईंको सुरूवात सहि समय गर्नुहोस्
स्मार्ट वेबमास्टर्सले आइटमको प्रक्षेपण ठीकसँग तयार गर्न निश्चित गर्नेछ। उत्पाद हन्टमा पोष्टिंगको कारण ट्राफिकमा स्पाइकको लागि स्टार्टअपहरूको तयारीको लागि अपर्याप्त कथाहरू सामान्य छन्, शिप इयर एनिमिस ग्लिटरको विकासकर्ता सार्वजनिक चासोले बगाएको जस्तो।
निश्चित गर्नुहोस् कि जब तपाईं सुरूवात गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, सबै चीजहरू तपाईंको मनपर्ने तरीकाले सेट गर्नुहोस्। यदि तपाईं तयार हुनुहुन्न र प्रयोगकर्तालाई अनुप्रयोगसँग समस्या छ भने, डाउनगोटहरू बगलाई औंल्याउँदै र बायाँ र दायाँ पड्काउँदा पुग्ने धेरै तयार पार्नुहोस्। तब अनुप्रयोगको भाग्य साइटको समुदाय व्यवस्थापकहरूको हातमा हुनेछ जब तपाईं तिनीहरूलाई सुधारिएको संस्करणको साथ ईमेल गर्नुहुन्छ।
व्यवस्थापकहरूलाई तपाईंले भर्खरै २.० लाई योजना गरेको सबै कुराको बारेमा जान्न आवश्यक छ ठीक गर्नका लागि अवरोध दिन। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले उदाहरण तयार गर्नुभयो।
मिडिया सम्पर्क बिना यो एक्लो नगर्नुहोस्
वेटरन प्रोडक्ट हन्ट प्रयोगकर्ताहरू एक स्टार्टअप सुरूवातसँग परिचित छन्, र तिनीहरूले मिडियामा सम्पर्कहरू पाएका छन् जसले प्रचारमा मद्दत गर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं तिनीहरूलाई नक्कल गर्न सक्नुहुन्न। कुनै ब्ल्गर वा पत्रकारलाई चिन्नुहोस् जसले तपाईंको समीक्षालाई सकारात्मक समीक्षाको साथ अघिल्लो उत्पादनलाई कभर गरे? नयाँ सुरूवातको बारेमा उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्न ईमेल ड्राफ्ट र तिनीहरूलाई सुरूवात दिनमा पठाउनुहोस्।
सन्देशहरू पनि एक व्यस्त दिन केहि केहि समय बचत गर्न स्वचालित गर्न सकिन्छ। यो नयाँ कवचको साथ अधिक आँखाको अगाडी तपाईंको नयाँ स्टार्टअप प्राप्त गर्नका लागि एक सजिलो तरीका हो, र यसरी बढि अपवाइटहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
अन्तिम विचार र सल्लाह
यी सबैलाई दिमागमा राख्नु सबैको लागि विचार गर्नुपर्दछ, छोड्नुहोस् उत्पादन हन्ट रुकी। यदि तपाईं तयार हुनुहुन्छ भने, प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंलाई फालिदिने जुनसुकै चीजसँग डिल गर्दछ। एक ठूलो प्रक्षेपण haywire पछि पछि relist बाध्य? कुनै समस्या छैन, हाम्रो समुदाय प्रबन्धकलाई अपडेटको साथ पार गरौं। अपेक्षित ब्याज भन्दा ठूलोको लागि तयार रहित? अर्को समयको लागि पाठ सिकियो। सबै पछि, स्मार्ट प्रयोगकर्ताहरू हिचकीबाट र गल्तीहरूबाट सिक्न सक्छन् अर्को पटकको वरिपरि राम्रो हुनको लागि। यो प्रयास लायक छ।
यी उदाहरणहरू, राम्रो र नराम्रो, शो उत्पादन कसरी शक्तिशाली हुन सक्छ। कुनै सुरुवातकर्ता सुरूवात गर्न चाहान्ने साइटले प्रस्ताव गरेको मानलाई राम्रोसँग हेर्नेछ। एक साधारण उत्पाद सुरूवात कम्पनीको सफलता को लागी स्प्रिंगबोर्ड हुन सक्छ। यदि तपाईं तयार हुनुहुन्छ र जानको लागि तयार हुनुहुन्छ भने, उत्पादन हन्टको फाइदाहरू तपाईंकै हुन्। भाग्यले साथ दिओस्!
टैग: अनुप्रयोग निर्मातालन्चमिनीबक्सउत्पादन खोजउत्पादन सुरूवातproductthuntसुरुवातमास्टार्टअप प्रमोशन
एन्ड्र्यू Gazdecki को संस्थापक र सीईओ हो बिजनेस एप्स - मोबाइल अनुप्रयोगहरूलाई सस्तो र साना व्यवसायको लागि सरल बनाउँदै। हामी आफैंमा एउटा आईफोन, आईप्याड, एन्ड्रोइड र एचटीएमएल app अनुप्रयोग प्लेटफर्म हौं जुन कुनै पनि साना व्यवसायको साथसाथै कुनै पनि प्रोग्रामिंग ज्ञानको बिना मोबाइल अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न, सम्पादन गर्न र प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ।